फ्लोरिडामा विदेशी वन्यजीव अभयारण्यहरू
संयुक्त राज्य अमेरिका फ्लोरिडा
by डन हेन्थर्न
सर्कसका हात्ती कहाँ सेवानिवृत्त हुन जान्छ? हामीले हालै एक झलक पार्यो जब यो घोषणा भएको थियो कि बर्नम र बेली सर्कसले आफ्नो हात्तीलाई केन्द्रिय फ्लोरिडा स्थानमा रिसेटिङ गरिनेछ। यो पहिलो पटक हामीले सुनेका थिए कि सर्कसले केन्द्रीय फ्लोरिडाको पोल्क काउन्टीमा आफ्नै एक्वायज थियो, तर त्यो फ्लोरिडामा रहेका हङकङहरूको मात्र ठूलो भेडा होइन। अर्को हाथी अभयारण्य दुई वर्ष पहिले खोला - फ्लोरिडा को पूर्व फ्लोरिडाको पूर्वी तटमा, नेभो समुद्र तटको उत्तरमा रहेको राष्ट्रिय हात्ती केन्द्र।
यो अफ्रिकी र एशियाली हाइफ्री दुवैको 225-एकड़ घर हो। छोटो र दीर्घकालिक सुविधा मान्यता प्राप्त चिडियाघरको आबादी र हत्याराहरुको कल्याण को समर्थन मा हेरविचार प्रदान गर्दछ। रमाइलो ठाउँहरू जस्तै ध्वनि, तर न त सुविधा जनताको लागि खुला छ।
त्यो अर्को प्रश्न हुन्छ। के त्यहाँ फ्लोरिडामा विदेशी वन्यजीव अभ्यारण्यहरू र पुनर्वास सुविधाहरू छन् जुन जनतालाई खुला छ? जवाफ हो, हाँ, धेरै छन्। र, जस्तै यो बाहिर जान्छ, तिनीहरू भ्रमणको लायक छन्।
जो प्रकृतिसँग जोड्ने इच्छा र विदेशी वन्यजीवलाई भेट्न चाहन्छन् उनीहरूले फ्लोरिडामा यी सानो "जंगली ठाउँहरू" भ्रमण गर्न विचार गर्न सक्छन्। यी अभियुक्तहरू र पुनर्वास सुविधाहरू वन्यजीवको घर हो जुन मौलिक राज्य हुन सक्छ वा हुन सक्छ। तिनीहरूले ठूलो बिरालोहरू जस्तै शेरहरू र बाघहरू मूल र विदेशी पक्षीहरूलाई रित्तो गर्न, ठूला ठूला घरहरू।
जबकि यी सुविधाहरूले आगन्तुकहरूलाई उनीहरूले प्रवेश शुल्क लगाउँछन् जुन कहिलेकाहीं चिडियाघर र अन्य जनावरका आकर्षणहरूको तुलनात्मक रूपमा हुन्छ।
यही कारणले गर्दा यी सबै अभियुक्तहरू र पुनर्वास सुविधाहरू गैर-लाभकारी संस्थाहरू होइनन् जुन असुरक्षित रूपमा सार्वजनिक वित्त पोषण, निजी दान र आगन्तुकहरूको प्रवेश शुल्कले आफ्नो अपरेशन फाइनान्समा प्राप्त गर्दछ। त्यसोभए, यदि तपाईं यी जंगली जनावरहरू हेर्नु भएकोमा हेर्नु भएको छ र फरक पार्न चाहन्छ ... भ्रमण गर्न, दान गर्न वा स्वयंसेवकाईमा विचार गर्नुहोस्।
डडे सिटीमा जंगली चीजहरू
यदि तपाईंले कहिल्यै टाम्पा बेको रहस्य मोरको बारेमा सुनेको छ भने, यो अहिले कर्नेलियस छ। टाम्पाको यो टूर-आधारित आकर्षण आकर्षणले विभिन्न अनौठो अनुभवहरू प्रदान गर्दछ, जसमा बाघ र अन्य जनावर मुनिहरूको साथमा तैरेर समावेश गर्दछ। भ्रमणको भ्रमणको भ्रमणमा निर्भर गर्दछ, तर आधारभूत जंगल सफारी सवारी (वयस्कों को लागि $ 14.99, वरिष्ठहरु को लागि $ 13.99 र $ 12.99 बच्चाहरु को लागि) सम्पूर्ण सुविधा को एक निर्देशित भ्रमण हो जहाँ तपाईं दुर्लभ बिल्लियों बिल्लियों, जेब्रास, बंदरहरु, कांगोरोस र र अधिक। ट्रामले पनि रोकिन्छ जहाँ तपाईं भैंसीहरू फीड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तस्बिरहरू वा भिडीयोहरू लिने अनुमति छैन, तर तपाईंको अनुभवको तस्बिरहरू खरिदका लागि उपलब्ध छन्।
37237 मेरिडियन एवेन्यू
Ph: 352-567-9 453
घण्टा: मङ्गलबार आइतबार 8:30 बजे बिहान 5:00 बजे
प्रवेश: भ्रमण विकल्पहरूमा निर्भर गर्दछ। आरक्षणहरू प्रोत्साहन गरिन्छ। वरिष्ठ छुटहरू ती उमेर 55 र ​​अधिकका लागि उपलब्ध छन्। Sunken जंगल टूर र जंगल सफारी सवारीको लागि असीमित पहुँचको लागि एक वार्षिक पास खरिद गर्नुहोस् एक वर्षको लागि खरिद मिति बाट।
ताम्पा मा बिग बिजुली बचाव
यदि तम्पामा ठूलो बिरालो रिभर्वमा ठूलो बिरालोहरू हेर्न आशा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ निराश हुनुहुन्न। त्यहाँ लगभग 200 एकड़ ट्रामको आकर्षणमा शेरहरू, बाघहरू, बाबसहरू, कुगाहरू र थप छन्।
1 992मा सुरु भएको, उद्धारले त्यागिएको, उपेक्षित, दुर्व्यवहार र सेवानिवृत्त ठूला बिल्लहरू लिन्छ र एक 100 भन्दा बढी ठाउँको आवासमा लिन्छ।
बिग बिट रक्षक
12802 आसान स्ट्रीट
घण्टा: हप्तामा6दिन खोल्नुहोस्, बिहीबार बन्द। समयको लागि भ्रमण कार्यक्रम हेर्नुहोस्।
प्रवेश: दिन र भ्रमण मा निर्भर गर्दछ। आरक्षण आवश्यक छ। केही भ्रमणहरू 10 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुसँग सीमित छन्।
सेन्ट क्लाउडमा केन्द्रीय फ्लोरिडा पशु रिजर्भ
40 भन्दा बढी ठूला बिल्लियों 57 माइल हिउँदै छन् र उनीहरूले 2015 को चौथा चौथाईमा आगन्तुकको होस्ट गर्दै छन् ... कि यदि पर्याप्त पैसा आफ्नो नयाँ घर निर्माण गर्न को लागी बृद्धि गरिन्छ। कोष सङ्कलन प्रयासहरू सफलतापूर्वक सफल भएका छन् अहिले सम्म भन्दा बढी रकम को लागी योजना निर्माण चरणहरु लाई राम्रो तरिकाले निर्माण को लागी अगाडी बढाने को आवश्यकता हो, तर शेरहरु, बाघहरु, तेंदुए, र कगारहरु लाई तपाईंको मौद्रिक सहायता को लागी अनुरोध गर्दै छन् ताकि निर्माण पूरा हुन सक्छ र उनिहरु लाई तिनीहरूको नयाँ घर।
तिनीहरू तपाईंलाई बसोबास भएपछि उनीहरूलाई भेट्न निमन्त्रणा दिन्छन्।
केन्द्रीय फ्लोरिडा पशु रिजर्व
500 Broussard Rd
घण्टा र प्रवेश: घोषित गर्न
सराटाटा मा बिग बिल्ली आवास र खाड़ी कोस्ट अभयारण्य
इङ्गल्याण्डको रोजेयर परिवारको उत्पत्ति पशु प्रशिक्षक थिए। सर्कस जडानको लामो इतिहासको साथ, ठूला बिल्लियों, भालूहरू, प्रजातान्त्रिकहरू, विदेशी पक्षीहरू र कष्टोइजहरू प्राकृतिक देखिन्छन। सम्भावित भ्रमण अन्य अभियुक्तहरूको तुलनामा फरक हुनेछ। आगन्तुक प्राय: रोसेर पारिवारिक काम ठूलो मौसमका साथ मौसमी प्रशिक्षण सत्रहरू हेर्न र जनवरीको दौडान र फेब्रुअरीको दिनमा तपाईं वास्तविक प्रदर्शन देख्न सक्नुहुन्छ।
बिग बिल्ली हबिटैट र खाड़ी कोस्ट अभयारण्य
7101 पामर बोलेवर्ड
घण्टा: बुधवार खोल्नुहोस शनिबार 12:30 देखि4बजे अपराह्न 1:00 र 2:00 बजे हुन्छ
प्रवेश: वयस्कों को लागि $ 15 र $7बच्चाहरु को लागि। पार्किङ निःशुल्क छ।
क्रोक एकाउन्ट्स रिटाइल पार्क र वाइल्डलाइफ केन्द्र तम्पा मा
कुखुरा, एल्गिगेटर, कछुए, कष्टोइज, सांप र एम्फिबिबीसहरूले तम्पामा क्रोक एनन्टिभर्समा आफ्नो घर बनाउँछन्। जबकि शनिबारको स्वयं-निर्देशित भ्रमणहरू "आगन्तुक प्रमाण" भएको पार्कका केही भागहरू हेर्नको लागि कम्तिमा महँगी तरिका हो जहाँ तपाइँले निर्देशित भ्रमणका क्रममा अनुभवहरू, फिडिंग प्रदर्शनहरू, फोटो अवसरों र केही हातहरूमा अनुभव पाउनुहुनेछ।
Croc Encounters Reptile Park र Wildlife Center
8703 बोल्स Rd।
घण्टा: शनिवार 11 बजे देखि 5:00 अपराह्न कुनै पनि दिन निर्देशित यात्राहरूको लागि, उपलब्धतामा निर्भर गर्दछ।
प्रवेश: स्निक पिक शनिवार, $5कूपनको साथ। निर्देशित भ्रमण प्रति व्यक्ति $ 45 वा प्रति $ 99 प्रति परिवार (5 सम्म सम्म)। समूह भ्रमणहरू, जन्मदिनका पक्षहरू र निजी पक्षहरू उपलब्ध छन्। निर्देशित भ्रमणहरूको लागि आरक्षण आवश्यक छ।
फ्लोरिडामा सर्वश्रेष्ठ स्पा
जनवरीमा फ्लोरिडा भ्रमण गर्दै
Gainesville समलैंगिक बार्स गाइड
5 पैसा-बचत विषयवस्तु पार्क संकल्प
लेक प्लाकड - मुरब्बत शहर
ग्रीष्म ट्रेवलमा फ्लोरिडा
विद्यार्थीहरूको लागि बेस्ट मध्य विद्यालय फील्ड ट्रिप विचार
तपाईं अलमो बारेमा कहिल्यै थाह छैन
रेल द्वारा ग्रैंड क्यानन को यात्रा
परिवारका लागि हर्सेई, पेंसिल्वेनिया,
कर्नर ब्रुक, न्यूफाउंडल्याण्ड
Hot Grill vs। Rutt's Hut: Clifton NJ's Hot Dog Battle
5 फिली घटनाक्रम तपाईं यो अगस्त मिस गर्न चाहनुहुन्न
सैन फ्रान्सिस्कोमा लास वेगास: यात्रा विकल्प
10 ठाउँ तपाई ओमाहामा जानुहुन्छ
10 डाउनलोड गर्न आवश्यक अनुप्रयोगहरू लन्डनको भ्रमण गर्दा
इङ्गल्याण्डमा रेस्टुरेन्ट, बारहरू र पबहरूमा टिपिङ
साना इलेक्ट्रोनिक्स र क्यामेराहरूको लागि उत्तम गैजेट ब्याग
फ्लोरेंस एअरपोर्ट र ट्रांसफर्स लाई फ्लोरेंस ट्रेन स्टेशन
केप रीइना: न्यूजिल्यान्डको उत्तरी टिप्स